အက်ပိုင္းကို ေရာက္လာတဲ့ ရွ႐ြတ္ခန္ ႐ုပ္ရွင္ျပန္႐ိုက္ေတာ့မယ့္ - SANTHITSA
အက်ပိုင္းကို ေရာက္လာတဲ့ ရွ႐ြတ္ခန္ ႐ုပ္ရွင္ျပန္႐ိုက္ေတာ့မယ့္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ Project zero ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ဘယ္႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီနဲ႔မွာစာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ေတာ့တဲ့ ေဘာလီးဝုဒ္က မင္းသားႀကီး ရွ႐ြတ္ခန္က ႐ုပ္ရွင္ျပန္႐ိုက္ေတာ့မယ္လို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔က ႐ုပ္သံ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ေျဖဆိုလိုက္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာၿပီမို႔လို႔ ရွ႐ြတ္ခန္ရဲ႕ ပရိသက္ေတြနဲ႔ မီဒီယာေတြက သူ႔ရဲ႕ကားသစ္ ထြက္ဖို႔ အေရးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ အခုေတာ့ သူက ႐ုပ္ရွင္ျပန္႐ိုက္ေတာ့မယ္ေျပာလို႔ အား လုံး သက္ ျပင္း ခ် ႏိုင္ ၾက ပါ ၿပီ ။
၂ေယာက္တြဲ႐ိုက္တဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ ရက္ဂ်္ နဲ႔ ခရစ္ရွနား ဒီေကတို႔ကို ႐ုပ္ရွင္ကုမၸဏီေတြက ဇာတ္လမ္းအပ္ထားပါတယ္။ ရွ႐ြတ္ခန္နဲ႔ လိုက္မယ့္ ဇာတ္လမ္းေတြကို ရွာၿပီး ဇာတ္ၫႊန္းခြဲခိုင္းထား တယ္လို႔ ႐ုပ္သံကဆိုတယ္။ ရွ႐ြတ္ခန္ကိုလည္း ဇာတ္ၫႊန္းေတြကိုေပးထားပါတယ္။ ႀကိဳက္တာေတြ႕ရင္လည္း ေ႐ြးလို႔ရေအာင္ ဖတ္ခိုင္းထားပါတယ္။ အဲ့ဒိဇာတ္ၫႊန္းေတြထဲက ရွ႐ြတ္ခန္ အႀကိဳက္ေတြ႕တဲ့ ဇာတ္လမ္းရၿပီဆိုတာနဲ႔ စ႐ိုက္ေတာ့မွာပါ။ မင္းသားက တရားဝင္ေၾကညာၿပီးၿပီဆိုေတာ့ သူ႔ကားေတြၾကည့္ရေတာ့မွာေပါ့။ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ဆုံး႐ိုက္ထားတဲ့ ပေရာဂ်က္ဇီး႐ိုးက သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္းမွာ သူ စိတ္ႀကိဳက္ေတြ႕ သေလာက္ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ကို ဝင္ေဖာက္ေတာ့လည္း ႐ုံ တင္ ခ နဲ႔ ဘဲ စား ဘဲ ေျခ ေလာက္ ပဲ ရ ခဲ့ ပါ တယ္ ။
အဲ့ဒိကား မေအာင္ျမင္လို႔ သူက သူ႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပန္သုံးသပ္ေနရပါတယ္။ ေဘာလီးဝုဒ္မွာ အက္ရွင္ကားေတြနဲ႔ ဒရမ္မာကားေတြမွာ အက္ရွင္ကားေတြက စီးပြားေရးအရ အျမတ္ထြက္ေနတဲ့အျပင္ လူႀကိဳက္ မ်ားေနပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းဇာတ္အိမ္ ခိုင္ခိုင္မာမာကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ ေတာလီးဝုဒ္ ကားေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကည့္ရႈလာ ၾကတဲ့အတြက္ ဒရမ္မာ သက္သက္ကားေတြက လူႀကိဳက္နည္းလာပါတယ္။ လက္ ေတြ႕ ဆန္ တယ္ ။ သူရဲေကာင္းဝါဒကို ႀကိဳက္တဲ့ ပရိသက္ေတြအတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပညာကို သက္သက္ျပခ်င္တဲ့ ရွ႐ြတ္ခန္လို မင္းသားေတြက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေနာက္ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါကို ေျပာင္းျပန္ လွန္ဖို႔အတြက္ရွ႐ြတ္ခန္ ဘယ္လိုႀကိဳးစားျပမယ္ဆိုတာကေတာ့ ေနာက္သူ႐ိုက္မယ့္ကားေတြကိုေစာင့္ၾကည့္မွ သာ သိ ႏိုင္ မွာ ပါ ။
ေမာင္ယႆ REF:flim fair .com photo ; flimfair
အကျပိုင်းကို ရောက်လာတဲ့ ရှရွတ်ခန် ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်တော့မယ့်
၂၀၁၈ ခုနှစ် Project zero ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း ဘယ်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီနဲ့မှာစာချုပ်မချုပ်တော့တဲ့ ဘောလီးဝုဒ်က မင်းသားကြီး ရှရွတ်ခန်က ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်တော့မယ်လို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်နေ့က ရုပ်သံ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေဆိုလိုက်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီမို့လို့ ရှရွတ်ခန်ရဲ့ ပရိသက်တွေနဲ့ မီဒီယာတွေက သူ့ရဲ့ကားသစ် ထွက်ဖို့ အရေးကို မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ အခုတော့ သူက ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်တော့မယ်ပြောလို့ အား လုံး သက် ပြင်း ချ နိုင် ကြ ပါ ပြီ ။
၂ယောက်တွဲရိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ရက်ဂျ် နဲ့ ခရစ်ရှနား ဒီကေတို့ကို ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေက ဇာတ်လမ်းအပ်ထားပါတယ်။ ရှရွတ်ခန်နဲ့ လိုက်မယ့် ဇာတ်လမ်းတွေကို ရှာပြီး ဇာတ်ညွှန်းခွဲခိုင်းထား တယ်လို့ ရုပ်သံကဆိုတယ်။ ရှရွတ်ခန်ကိုလည်း ဇာတ်ညွှန်းတွေကိုပေးထားပါတယ်။ ကြိုက်တာတွေ့ရင်လည်း ရွေးလို့ရအောင် ဖတ်ခိုင်းထားပါတယ်။ အဲ့ဒိဇာတ်ညွှန်းတွေထဲက ရှရွတ်ခန် အကြိုက်တွေ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းရပြီဆိုတာနဲ့ စရိုက်တော့မှာပါ။ မင်းသားက တရားဝင်ကြေညာပြီးပြီဆိုတော့ သူ့ကားတွေကြည့်ရတော့မှာပေါ့။ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့ ပရောဂျက်ဇီးရိုးက သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာ သူ စိတ်ကြိုက်တွေ့ သလောက် စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကို ဝင်ဖောက်တော့လည်း ရုံ တင် ခ နဲ့ ဘဲ စား ဘဲ ခြေ လောက် ပဲ ရ ခဲ့ ပါ တယ် ။
အဲ့ဒိကား မအောင်မြင်လို့ သူက သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ပြန်သုံးသပ်နေရပါတယ်။ ဘောလီးဝုဒ်မှာ အက်ရှင်ကားတွေနဲ့ ဒရမ်မာကားတွေမှာ အက်ရှင်ကားတွေက စီးပွားရေးအရ အမြတ်ထွက်နေတဲ့အပြင် လူကြိုက် များနေပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ် ခိုင်ခိုင်မာမာကို ကြည့်ချင်ရင် တောလီးဝုဒ် ကားတွေကို ရွေးချယ်ကြည့်ရှုလာ ကြတဲ့အတွက် ဒရမ်မာ သက်သက်ကားတွေက လူကြိုက်နည်းလာပါတယ်။ လက် တွေ့ ဆန် တယ် ။ သူရဲကောင်းဝါဒကို ကြိုက်တဲ့ ပရိသက်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင်ပညာကို သက်သက်ပြချင်တဲ့ ရှရွတ်ခန်လို မင်းသားတွေက တဖြည်းဖြည်းချင်း နောက်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါကို ပြောင်းပြန် လှန်ဖို့အတွက်ရှရွတ်ခန် ဘယ်လိုကြိုးစားပြမယ်ဆိုတာကတော့ နောက်သူရိုက်မယ့်ကားတွေကိုစောင့်ကြည့်မှ သာ သိ နိုင် မှာ ပါ ။
မောင်ယဿ REF:flim fair .com photo ; flimfair
ဆယ်လ်မန်ခန်း ရဲ့ တိုက်ဂါး ၃ အခြေအနေကောင်းရင် စက်တင်ဘာ ထဲမှာ ပြသမယ် အီရတ်နိုင်ငံက ဆေရုံတစ်ရုံမှာ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန် သူနာပြုတွေကို အဘူ အူစမန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်သွေးကြွ အုပ်စုတစ်စုက ဓားစာခံအဖြစ် ဖမ်းထားပါတယ်။ အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ က အေးဂျင့် တိုက်ဂါးကို ပါကစ္စတန်အေးဂျင့် ဇိုယာနဲ့ တွဲပြီး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကာ ဓားစာခံတွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေ ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိအချိန်မှာ အမေရိကန်စစ်တပ်က အဲ့ဒိဆေးရုံက အကြမ်းဖက်သမားတွေကို အပြတ်ရှင်းဖို့ အတွက် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု တွေ လုပ်ဖို့ လေယာဉ်တွေ လွှတ်လိုက်ပါပြီ။ အိန္ဒိယ ပါကစ္စတန် ထောက်လှမ်းရေး ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး က သူနာပြုတွေကို ရအောင်ကယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့ရပါတယ်။ …
ဂလိုက်ဒါစီးပြီး ဒရမ်တီးသူ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြည့်ရှုသူများပြီး နာမည်ကြီးနေပါတယ် …. ။
Unicode ဂလိုက်ဒါစီးပြီး ဒရမ်တီးသူ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြည့်ရှုသူများပြီး နာမည်ကြီးနေပါတယ် …. ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ထူးထူးခြားးခြား ဖြစ်စဉ်တွေ ရီစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေက မကြာခဏဆိုသလိုပဲ ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ် ။ အခုလည်း တူရကီနိုင်ငံက လူတစ်ယောက်က အဖော်နဲ့ အတူ ဂလိုက်ဒါစီးရင်းက လေထဲမှာ ဒရမ်တီးပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းက လိုင်းပေါ်မှာ ပြန့်နှံ့နေပါတယ် ။ တူရကီ ဂီတပညာရှင် အာမတ်စလစ်ဟာ တူရကီနိုင်ငံ တီကာဒက်ရှ် ပြည်နယ်က တောင်တန်းတွေပေါ်ကနေ မြေပြင်မီတာ၆၀၀ အမြင့်မှ သူ့ရဲ့ ဒရမ်ကို လွယ်ကာ အဖော်တစ်ယောက် နဲ့ အတူ ဂလိုက်ဒါ စီးပြခဲ့တာပါ ။ အခုလိုင်းပေါ်ကို သူတင်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်က ပလူပျံ …
This Month : 4643
Total Visit : 142784
Total Hits : 2076774